विश्वका क्लबहरूमध्येका १० उत्कृष्ट क्रेष्ट
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलविश्वका क्लबहरूमध्येका १० उत्कृष्ट क्रेष्ट
एजेन्सी, २९ वैशाख । स्पेनिस खेलपत्रिका ‘मार्का’ले केही समयअघि विश्वभरिका क्लबहरूका क्रेष्ट (लोगो) मध्ये सुन्दर, आकर्षक र उत्कृष्ट क्रेष्ट छनौटका लागि अनलाइन भोटिङको आह्वान गर्‍यो । भोटिङमा सहभागी विश्वभरिका विभिन्न ५० क्लबहरू थिए ।
शीर्ष १० स्थानको लागि क्लबहरूबीच निकै रस्साकस्सी भयो । सुरुआतमा नै स्पेनिश क्लब रियल मड्रिडले आफ्नो दाबेदारी गज्जबले प्रस्तुत गर्‍यो तर रियलको अग्रता फ्लुमिनीन्सले तोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लियो । समर्थकहरूका भोट आइरह्यो सँगै विभिन्न क्लबहरू उत्कृष्ट के्रष्ट भएको क्लबको शीर्ष स्थान पनि आइरहे ।
क्रमबद्ध रूपमा कोलो कोलो, सीएसकेए मस्को, फेनरबाहिस र बेसिकटास पालैपालो शीर्ष स्थानमा उक्लिए । एक करोड ४० लाख समर्थकहरूले गरेको अनलाइन भोटिङमा शीर्ष १० स्थानमा पर्न सफल क्लबहरू यस प्रकार छन्ः
१. राजा क्यासाब्लान्का
अनलाइन भोटिङमा ३७ लाख मत पाउँदै विश्वकै उत्कृष्ट के्रष्ट भएको क्लबको पहिलो स्थानमा रहन सफल भयो, मोरोक्कन क्लब राजा क्यासाब्लान्का । सन् १९४९ मा स्थापना भएको क्लब द ग्रीन इगल्स उपनामले चिनिन्छ । सन् २०१३ को फिफा क्लब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको क्यासाब्लान्का क्लब विश्वकपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो अरबीयन फुटबल क्लब हो ।
२. अल आली स्पोर्टिङ क्लब
अफ्रिकी मुलुक इजिप्टको कायरो सहरमा सन् १९०७ मा स्थापना भएको क्लबको हो, अल आली । ३० लाख मतसहित दोस्रो स्थानमा रहन सफल क्लब अल आली शताब्दीकै उत्कृष्ट फुटबल क्लब भनेर चिनिन्छ । सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहन्सबर्गमा अल आलीलाई ‘द क्लब अफ द सेन्चुरी’को अर्वाड दिइएको थियो ।
अल आली अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने सफल क्लबहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको क्लब हो । यसले २० अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितिसकेको छ । २६ उपाधि जित्दै सूचीको पहिलो स्थानमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड रहेको छ ।
३. फ्लुमिनिन्स फुटबल क्लब
साधारतया फ्लुमिनिन्स वा ट्राइक्लर भनेर चिनिने ब्राजिलियन क्लब फ्लुमिनिन्स एक लाख ६९ हजार ३ सय भोटसहित सूचिको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । अनलाइन भोटिङको मध्यक्रममा राम्रो अग्रता लिएको क्लब अन्त्यमा भने तेस्रो स्थानमा मात्र रह्यो । सन् १९०२ मा स्थापना भएको क्लब ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीमा धेरै संख्यामा उत्कृष्ट खेलाडी पठाउने पाँचौ ब्राजिलियन क्लब हो ।
४. रियल मड्रिड
सुरुआतमा राम्रो भोट पाएर उत्कृष्ट हुने लगभग निश्चित भइसकेको रियल मड्रिड अन्तिम समयमा चिप्लिएर सूचिको चौथो स्थानमा रहन बाध्य भयो । कूल एक लाख ३४ हजार २ सय भोट पाएको रियल विश्वचर्चित क्लबमध्ये एक हो । सन् १९०२ मा स्थापना भएको रियल २०औं शताब्दीको उत्कृष्ट क्लब, युरोपियन क्लबहरूमध्ये २०औं शताब्दीको सर्वाेत्कृष्ट क्लब र युरोपियन च्याम्प्यिनस लिग लगातार जितेर ह्याट्रिक गर्ने एक मात्र क्लब हो ।
५. फेनेरबाहि स्पोर्टिङ क्लब
टर्कीको व्यवसायीक फुटबल क्लब फेनेरबाही ७८ हजार ४ सय भोटसहित सूचिको पाँचौ स्थानमा रहेको छ । फेनेरबाही क्लब समर्थकहरूको सबैभन्दा बढी समर्थन पाउने टर्कीस क्लब हो । टर्की र विश्वभरिका विभिन्न देशहरूबाट फेनेरबाहीलाई मन पराउने थुप्रै मानिसहरू छन् । फेनेरबाही र अर्काे टर्कीस क्लब गलातासारयबीचको भिडन्तलाई विश्वकै उत्कृष्ट खेलमध्येका एक मात्रिछ । सन् २००९ सेप्टेम्बरमा बेलायती पत्रिका डेली मेलले विश्वकै महान फुटबल प्रतिस्पर्धाहरूमा दोस्रो स्थानमा राखेको थियो ।
७५ हजार ९ सय भोटसहित इंग्लिस क्लब लिभरपुल सूचिको छैटौं स्थानमा रहेको छ । सन् १८९२ मा स्थापना भएको क्लबले १९०१ बाट सहरको चिह्न लिभर चरालाई क्लबको के्रष्टमा प्रयोग गर्न थालेको थियो । सन् २०१९ मा लिभरपुल सर्वाधिक कमाइ गर्ने सातौं फुटबल क्लब बनेको थियो ।
उत्कृष्ट क्रेष्ट भएको क्लबको सूचिमा सातौं स्थानमा रहेको क्लब हो, स्पेनिस क्लब बार्सिलोना । कूल ७५ हजार भोट पाएको बार्सिलोना उत्कृष्ट १० मा पर्ने दोस्रो र अन्तिम स्पेनिस क्लब हो । सन् १८९९ मा स्थापना भएको क्लब आम्दानीको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा धनी क्लब हो । घरेलु प्रतियोगितामा ७४ वटा ट्रफी जितेको बार्सिलोनाले २० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेको छ ।
८. कोलो कोलो
सन् १९२५ मा स्थापना भएको चिलियन क्लब कोलो कोलो ६६ हजार ८ सय भोटसहित सूचिको आठौं स्थानमा छ । क्लबको क्रेष्टमा देखिने आकृति मापुचेका सरदार कोलो कोलोको हो, जसले चिली राष्ट्रलाई बचाउन स्पेनी साम्राज्यविरुद्ध अरौको युद्ध लडेका थिए । क्लब स्थापना गर्दाका खेलाडी लुईस कन्ट्रेरासका अनुसार क्लबको क्रेष्टले देशका मुख्य आदीवासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
९. सीएसकेए मस्को
४२ हजार ९ सय भोटसहित सूचीको नवौं स्थानमा रहेको क्लब हो, सीएसकेए मस्को । सन् १९११ मा स्थापना भएको क्लबको पूरा नाम सेन्ट्रल स्पोर्ट्स क्लब मस्को हो । रसियाको सबैभन्दा पुरानो फुटबल क्लब सीएसकेए दोस्रो विश्व युद्धपछि भने सफल रह्यो ।
६ सिजनमा पाँच पटक उपाधि जित्न सफल सीएसकेए युरोपियन कप जित्ने पहिलो रसियन क्लब हो । सन् २००५ मा स्पोर्टिङ सीपीलाई फाइनलमा हराउँदै सीएसकेएले यूईएफए कप जितेको थियो ।
टर्कीको इस्तानबुलस्थित बेस्किटास जिल्लामा सन् १९०३ मा स्थापना भएको क्लब बेस्किटास सूचिको १०औं स्थानमा रहेको छ । कूल ३४ हजार ४ सय भोट पाएको बेस्किटास उत्कृष्ट दशको सूचिमा पर्ने दोस्रो टर्कीस क्लब हो । ब्ल्याक इंग्लस उपनामले चिनिने बेस्किटास ट्रर्कीका उत्कृष्ट र सफल क्लबमध्येको एक हो ।